Fumanisa izixhobo zobhaka kwiZara Home | IBezzia
UMaria vazquez | 05/10/2021 12:00 | Ukupheka
Ngaba ujonge ukwindla ukubeka i-oveni? Uyalonwabela ivumba leekhekhe ezisandula ukubhakwa, iimuffins kunye neicookies? Ukuba kunjalo, awuyi kuba nakho ukumelana nezixhobo ezintsha zokubhaka ezivela eZara Home. Kuba ukongeza ekusebenzeni, zintle.
Ukungena kwiZara Home akukaze kube ngumbono olungileyo ukuba ufuna ukugcina iwallet yakho ikhuselekile. Kwimeko yam, kwaye ndiyazi ukuba ayindim ndedwa, yimeko enjalo kuba bahlanganise izixhobo zasekhitshini kwingqokelela yabo. Kwaye kukuba xa umntu ezonwabela ngokubhaka iilekese, kubonakala kungabikho nenani elaneleyo lomngundo.
Sukuyenza impazamo, phakathi kwezixhobo ezintsha zokubhaka ezivela eZara Ekhaya uya kufumana ngaphezulu kokubumba. Ukusuka kwiingxowa zekhekhe ukuya kwiphepha lokubhaka, yonke into oyifunayo ukuze ukwazi ukwenza zonke iintlobo zamalungiselelo amnandi. Kodwa makhe sihlalutye zonke iindaba zayo nganye nganye.
1 Aluminium ngumngundo
2 Abumba abicah
3 Iseti yebhegi yestry
4 Iphepha lokubhaka
5 Isitya se-porcelain ende
Kwingqokelela entsha yeZara yasekhaya uya kufumana izinto ezahlukeneyo zokubumba ukwenza zonke iintlobo zamalungiselelo amnandi. Ukusuka kuyilo olujikeleze ubumbeko olujikeleze ubume kwabanye obunemilo emide. Zonke zenziwe ngealuminium ene I-polytetrafluoroethylene yangaphandle kwi-beige.
Kwaye ukuba kulo mgca wezinto ze-pastry uyakufumana kwakhona iigusha, zilungele pheka iidessert zakho ngokukodwa, ukubheja okukhuselekileyo ukumangalisa iindwendwe zakho. Biscuit, panna cotta, flan… Uza kupheka ntoni kuzo?
Ngaba uqhele ukusebenzisa ukubumba abicah? Ikhaya laseZara libandakanya kule ngqokelela abumba abicah ezimhlophe ilungele ukwenza iimuffins okanye iimuffins. Ngabo awuyi kufuna ukusebenzisa iifomsile zamaphepha kwaye emva kokuzisebenzisa kuya kufuneka uzifake kwisitya sokuhlamba izitya ukuze uzilungiselele kwakhona. Babandakanya nengxowa yomqhaphu yokugcina ngakumbi.
Iseti yebhegi yestry
Iseti yebhegi yepastry ibandakanya Iintloko ezi-5 ezahlukeneyo nezicocekileyo. Iseti efanelekileyo yokunika umnxeba wokugqibela iilekese zakho okanye ukuququzelela ukuzaliswa kwabanye. Ngomzimba we-ethylene vinyl acetate kunye nomlomo we-polypropylene, ixabiso layo lifikeleleka kakhulu: € 12,99
Iphepha lokubhaka libalulekile umgca wetray kwaye ke uthintele iilekese ekuncamatheni kuyo. Isiqinisekisa ngokulula kwaye kulula ngakumbi ukungazichazi kwaye akukho nto ifuna "ukubandezeleka" yakuba yenzekile loo nto. Eli livela eZara Home liphepha elihle lokubhaka, elinemizobo yeekeyiki, elungele ukubonisa iilekese etafileni. Ipakethi nganye iqulethe iiyunithi ezingama-20 kwaye ixabiso layo liyi- € 5,99.
Isitya se-porcelain ende
Xa sisenza ikeyiki okanye ikeyiki sifuna ukuba ijonge etafileni. Kunzima ukuyenza kwipleyiti, yiyo loo nto izitya ezinde ezinesiseko esijikelezileyo zinomtsalane. Uyilo onokulufumana phakathi kwezinto ezintsha zokwenza i-pastry zaseZara zinesiseko somthi kunye nesiseko se-porcelain.
Isiseko silinganisa iisentimitha ezingama-32 enobubanzi, ukuyenza igqibelele kwezo iilekese ziphekwe ekubunjweni kwealuminium eqokelelekileyo, kodwa ikwabonisa nentaba yeemafini okanye iimuffins etafileni. Ngaba umlomo wakho awumanzi?
Ngaba kuphela kwento entsha esinokuqokelelwa kuyo yiZara Home? Hayi akunjalo! Njengoko besesitshilo ngaphambili, ezi zezintsha kodwa, ukongeza, unokufumana kwingqokelela yeekhitshi kunye nezinye izixhobo zasekhitshini abanye izixhobo zekhekhe ezifana nezitya zokuxuba i-aluminium, iintonga kunye ne-silicone spatula, iisefa okanye izileyi, ebesele ndithethile ngazo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, uyabakhumbula? Kwaye kukuba ukongeza ekusebenzeni, ezi ziba sisipho esifanelekileyo kubathandi bekhekhe
Kodwa ayilungiswanga iilekese kuphela emakhitshini ethu. Kwi Ukuqokelelwa kwezinto zasekhitshini kunye nempahla Ukusuka kwifemu uyakufumana yonke into oyifunayo ukuze wenze imenyu yakho yemihla ngemihla ibe lula. Kananjalo akuyi kuba naxhala lokuba ubashiye kwikhawuntara, kuba uyilo lwabo lumkile kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Ukupheka » Fumanisa izixhobo zokubhaka kwiZara Home